Ihowuliseyili TBG-2088S / P Umatshini wokuhlalutya oSombulula i-Intanethi kunye noMthengisi | IBOQU
I-TBG-2088S / P kwi-Intanethi yokuHlanganisa iTurbidity
Isicazululi se-TBG-2088S / P sombane sinokudibanisa ngokuthe ngqo ukungabinakho ngaphakathi komatshini wonke, kwaye sigcine embindini kwaye siyilawule kumboniso wepaneli yokuchukumisa; Inkqubo idibanisa umgangatho wamanzi kuhlalutyo lwe-Intanethi, ugcino lwedatha kunye nemisebenzi yokulinganisa kwinto enye, Ukuqokelelwa kwedatha yokuHlaba kunye nohlalutyo kubonelela ngokulula okukhulu.
Inkqubo edibeneyo, iyakwazi ukubona ukungabinamandla;
4. Umbane okhupha amanzi amdaka okrelekrele, ngaphandle kwesondlo okanye ukunciphisa amaza olondolozo lwencwadi;
Indlela yokulinganisa iTurbidity
Egqithileyo I-TBG-2088S Imitha yokuSebenzisa i-Intanethi
Okulandelayo: I-TSG-2087S yeemitha eziMisiweyo eziQinisekisiweyo zoMbane (TSS)
I-TBG-2088S / P
Resolution: 0.1, Ukuchaneka: ± 0.5 ℃
Resolution: 0.01NTU Ukuchaneka: ±2% FS
Umgangatho: 0-50 ℃ ；
Itrobidity, umlinganiso wobumnyama kulwelo, ibonakalisiwe njengesalathiso esilula nesisiseko somgangatho wamanzi. Isetyenziselwe ukubeka esweni amanzi okusela, kubandakanya nalawo aveliswa kukuhluzwa amashumi eminyaka. Umlinganiso weTurbidity ubandakanya ukusetyenziswa kwesibane sokukhanya, esineempawu ezichaziweyo, ukumisela ubungakanani besixa sobungakanani bezinto ezikhoyo emanzini okanye kwenye isampulu yolwelo. Ukukhanya kwesibane kubhekiswa kuko njengokukhanya kwesibane. Izinto ezikhoyo emanzini zibangela ukuba ukukhanya kwesibane sokukhanya kusasazeke kwaye oku kukhanya kuchithachithiweyo kufunyenwe kwaye kulinganiswe isixa kumgangatho wokulinganisa onokulandeleka. Ukuphakama kobuninzi bezinto eziqulathwe kwisampulu, kokukhona ukusasazeka kwesibane sokukhanya kwesibane kunye nokuphakama kobunzima bokubakho.
Naliphi na isuntswana ngaphakathi kwesampulu edlula kwindawo echaziweyo yesiganeko sokukhanya (ihlala isibane se-incandescent, isibane esikhupha ukukhanya (i-LED) okanye i-laser diode), inokuba negalelo kuxinzelelo lwesisampulu. Injongo yokuhluza kukuphelisa amasuntswana kuyo nayiphi na isampulu enikiweyo. Xa iinkqubo zokuhluza ziqhuba kakuhle kwaye zibekwe iliso nge-turbidimeter, ukungcoliseka kwamanzi amdaka kuya kubonakaliswa ngumlinganiselo ophantsi nozinzo. Ezinye iiturbidimeter ziye zingasebenzi kakuhle kumanzi acoceke kakhulu, apho ubukhulu bamasuntswana kunye nenqanaba lokubala kwamasuntswana liphantsi kakhulu. Kwezo turbidimeter zisweleyo ubuntununtunu kula manqanaba asezantsi, utshintsho kumdaka olwenzeka kulwaphulo lokucoca ululwelo lunokuba lincinci kangangokuba lungahlukaniswa nengxolo esisiseko yongxamiseko yesixhobo.
Le ngxolo isisiseko inemithombo eliqela kubandakanya nengxolo yesixhobo (ingxolo ye-elektroniki), ukukhanya kwesixhobo, isampulu yengxolo, kunye nengxolo kwindawo yokukhanya uqobo. Oku kuphazamiseka kuyongezwa kwaye baba ngowona mthombo uphambili weempendulo zeturbidity ezintle kwaye zinokuba nefuthe elibi kumda wokubhaqwa kwesixhobo.
Isifundo semigangatho kumlinganiso we-turbidimetric siyinkimbinkimbi ngokuyinxalenye yeentlobo zemigangatho ekusebenziseni okuqhelekileyo kwaye yamkelekile ngeenjongo zokunika ingxelo yimibutho enje nge-USEPA kunye neeNdlela eziMiselweyo, inxenye sisigama okanye inkcazo esetyenzisiweyo kubo. Kuhlelo lwe-19 lweeNdlela eziMiselweyo zoVavanyo lwaManzi naManzi amdaka, kwenziwa ingcaciso ekuchazeni imigangatho yokuqala xa ithelekiswa nemilinganiselo yesibini. Iindlela eziqhelekileyo zichaza umgangatho wokuqala njengowalungiselelwe ngumsebenzisi kwizinto ezilandelwayo eziluhlaza, usebenzisa iindlela ezichanekileyo kunye naphantsi kweemeko zokusingqongileyo ezilawulwayo. Kubunzulu bomoya, iFormazin kuphela kwemigangatho eyinyani eyaziwayo kwaye yonke eminye imigangatho ibuyiselwe umva kwiFomazin. Ukongeza, ii-algorithms zezixhobo kunye nokubalulwa kwee-turbidimeter kufuneka ziyilelwe kulo mgangatho uphambili.
Iindlela eziqhelekileyo ngoku zichaza imigangatho yesibini njengemigangatho yomenzi (okanye umbutho wovavanyo ozimeleyo) oqinisekisileyo ukuba unika iziphumo zokulinganisa izixhobo (ngaphakathi kwemida ethile) kwiziphumo ezifunyenwe xa isixhobo silungiswe ngemigangatho yeFomazin elungiselelwe umsebenzisi (imigangatho yokuqala). Imigangatho eyahlukeneyo efanelekileyo yokulinganiswa iyafumaneka, kubandakanya ukurhoxiswa kwesitokhwe kwe-4,000 NTU Formazin, ukumiswa okumiselweyo kweFomazin (iStablCal ™ eQinisekisiweyo iMigangatho yeFomazin, ekwabizwa ngokuba yiMigangatho yeStablCal, iStablCal Solutions, okanye iStablCal), kunye nokumiswa kwezorhwebo kwee-microspheres ye-styrene divinylbenzene copolymer.
1. Ukuchongwa kwendlela ye-turbidimetric okanye indlela elula
Umbane onokulinganiswa ngendlela ye-turbidimetric okanye indlela yokukhanya ethe saa. Ilizwe lam ngokubanzi lamkela indlela ye-turbidimetric yokumisela. Xa uthelekisa isampulu yamanzi kunye nesisombululo esisemgangathweni esixineneyo esilungiswe ngekaolin, iqondo lobushushu alikho phezulu, kwaye kuyacaciswa ukuba ilitha enye yamanzi acoliweyo ine-1 mg yesilica njengeyunithi yongxamiseko. Kwiindlela ezahlukeneyo zemilinganiselo okanye imigangatho eyahlukeneyo esetyenzisiweyo, amaxabiso afumanekayo omlinganiselo wongxamiseko anokungangqinelani.
2. Imilinganiselo yemitha yeTurbidity
Umbane onokulinganiswa nawo unokulinganiswa ngemitha yovalo. I-turbidimeter ikhupha ukukhanya ngecandelo lesampulu, kwaye ifumanise ukuba kukukhanya okungakanani okusasazekayo ngamasuntswana emanzini ukusuka kwicala elingama-90 ° ukuya kwisibane sokukhanya. Le ndlela yokulinganisa ukukhanya ibizwa ngokuba yindlela yokuchithachitha. Nawuphi na umsinga wenene kufuneka ulinganiswe ngale ndlela.
I-TSG-2087S yezoRhwebo ziQinisekisiwe eziQinisekisiweyo (TS ...